Libuyele emuva iloli ebelinofata omusha - Ilanga News
Home Izindaba Libuyele emuva iloli ebelinofata omusha
Ufice isango lasemishini abeya kulo likhiyiwe
UMFU Mzokhona Nhlangulela weBandla lamaRoma aKhatholika okuthiwa ukhiye isango sekufike umfundisi okufanele ashintshane naye emishini ayiphethe.
LIPHINDELE emuva nempahla iloli ebelithwele izimpahla zikafata wamaRoma aKhatholika, uFata Paul Manci, waseMariannhill Monastery Cathedral, obekuthiwa makayongena kwipherishi yaseSt Magdalene eziMbokodweni, okukhishwa kuyona uMfu Mzokhona Nhlangulela ILANGA elabika ngaye emasontweni amabili adlule esolwa ngokushela amantombazane eyovuma izono esakristi.
ILANGA lihabule ngemithombo yalo ukuthi uMbhishobhi Mlungisi Dlungwane wesifundabhishobhi saseMariannhill, ukhiphe umyalelo wokuthi uFata Nhlangulela ashintshwe ayosontisa eMariannhill, besekuthi uFata Manci angene esikhundleni sakhe ukwenzela ukuthi kube nokuthula kuleli bandla.
Umthombo weLANGA uthi amakholwa aseMariannhill avele abhikisha ngaphandle kwesonto ngeSonto, ethi uFata Manci akayi ndawo, kawamdingi uFata Nhlangulela emishini yawo ngenxa yezinsolo zokushela asolwa ngazo.
“Uqhubekile uFata wenza izinhlelo zokuthi ahambe njengokomyalelo kambhishobhi, wagcwalisa iloli nezimpahla zakhe okuthe uma efika emishini okuthiwe makaye kuyona, wafica kukhiywe isango, waphoqeka ukuba ajike abuyele emuva,” kusho lo mthombo.
ILANGA lihoshe ngemithombo yalo ukuthi isizathu salokhu wukuthi uFata Nhlangulela ubengatshelwanga lutho ngokushintshwa kwakhe.
“Uma kuzoshintshwa umfundisi, umbhishobhi kufanele abathinte abefundisi abathintekayo, kodwa lokho akwenzekanga. Okunye, uFata Nhlangulela uzoya kanjani kule perishi esezwile ukuthi amakholwa akhona kawamfuni?” kusho lo mthombo.
ILANGA lithinte uFata Nhlangulela ocele ukuba kuthintwe uFata Vusi Sokhela okhulumela ibandla.
UFata Sokhela uvumile ukuthi kukhona amakholwa abebhikisha engafuni ukuthi uFata Manci ahambe.
“Umbhishobhi uhlale nabo phansi abebeyizithunywa zabebebhikisha, wabachazela ukuthi ngokwenqubo yebandla nguye yedwa onelungelo lokushintsha abapristi ngokulekelelwa ngabeluleki bakhe, hhayi amakholwa.
“Yize kunjalo, umhlekazi (umbhishobhi) ubahloniphile wabanika indlebe, wabe esebuza kuFata Manci ukuthi uthini kulolu daba. Ufata uhambe emazwini kamhlekazi, wathi uzozwa ngombhishobhi ukuthi makaye kuphi, hhayi amakholwa.
“Umbhishobhi ube esebanika isikhathi esingangesonto bobabili labo fata ukuthi bashintshane. Bagcine bevumelene ukuthi bazoshintshana kusasa ngoLwesihlanu. Bengingazi ukuthi uFata Manci uke waya emishini yakhe entsha, wafika kukhiyiwe.
“Kufanele sikucacise nokho ukuthi ukushintshwa kwalabo fata akusho ukuthi uFata Nhlangulela utholwe enecala kulezi zinsolo abekwe zona, kodwa umhlekazi ubefuna kube nokuthula. Uphenyo ngezinsolo lusaqhubeka, sisalinde abathintekayo beze ngaphambili kuqhutshekwe nophenyo,” kusho uFata Sokhela.
Previous articleWathunjwa esemhhumeni ngeSoweto Derby
Next articleKuphume izidumbu ecasulwa yiziqashi